प्रिन्ट संस्करण - सुनसान अस्पताल ! - समाचार - कान्तिपुर समाचार
सुनसान अस्पताल !
यो त्यही अस्पताल हो जसले बिरामी र चिकित्सक नै नभए पनि त्रिविबाट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाएको छ
राजधानीको घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको ९ तले भवन । तस्बिर : मकर/कान्तिपुर
भाद्र ५, २०७४-नौ तले अपार्टमेन्ट । रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ । यो अपार्टमेन्टसँगै अर्का दुई भवन पनि छन् । मूलगेटमा एक जना गार्ड बस्छन् । गेटको दायाँतिर अर्थोपेडिक्स ओपीडी, एक्सरे र अल्ट्रासाउन्डका सामान जडान गरिएका छन् । भवन र बेड छन् तर बिरामी छैनन् । न चिकित्सक नै छन् । आकस्मिक कक्षसमेत सुनसान छ । सुनसान अस्पताल बिहान १० बजे खुल्छ, ५ बजे बन्द हुन्छ । झट्ट हेर्दा यो क्लिनिकजस्तो पनि देखिँदैन ।
यो दृश्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन १२ मा सम्बन्धन दिएको राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको हो । सञ्चालनमै नआएको यो अस्पतालमा एमाले नेता बसरुद्दिन अन्सारीको लगानी छ । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेर डा. गोविन्द केसीले ११ औं आमरण अनशन सुरु गरेको तीन दिनपछि त्रिविले यसलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो ।
गाइनो वार्डको बेडमा बसेर खाजा खाँदै सरसफाइमा खटिने कर्मचारीहरू । तस्बिर : मकर/कान्तिपुर
अस्पतालको ८ तलासम्म लिफ्ट छ । हरेक कोठाको बाहिर विभिन्न विभागको नाम लेखिएको छ । भित्र बेड पनि छन् तर बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको छ ।
रिपोर्टिङका क्रममा आइतबार मध्याह्न पुग्दा अस्पताल सुनसान थियो । एक वर्षअघि २४ सै घण्टा सेवा हुँदा बिरामी आउने गरे पनि अहिले आउनै छाडेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताए । ‘पहिला त अपरेसन पनि हुन्थ्यो । अहिले त १० देखि ५ बजेसम्म खुले पनि रगत जचाउने एक दुई जनाबाहेक कोही आउँदैनन्,’ एक कर्मचारीले भने । आइतबार संवाददाता पुग्दा आकस्मिक कक्षमा एक महिला रगत परीक्षण गराउने कागज लिएर अघि बढिरहेकी थिइन् । आकस्मिक कक्ष नजिकैको कुर्सीमा नर्सहरू गफ गरिरहेका थिए । कोही मोबाइल चलाइरहेका थिए । टिकट काउन्टरमा कोही थिएन । आकस्मिक कक्षमा एक पुरुषलाई स्लाइन लगाएको थियो ।
अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको यो भवनको बाहिरी मूल ढोकामा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज लेखिएको छ । भुइँ तलाका कोठामा आकस्मिक कक्ष तथा टिकट काउन्टर छन् । एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन राखिएका छन् तर कोठामा मान्छे छैनन् । आठौं तलामा कक्षाकोठा बनाइएको छ । अपार्टमेन्टको सरसफाइ गर्न पाँचजना महिला कर्मचारी राखिएका छन् । आइतबार दिउँसो सफाइ गर्ने महिलाहरू गाइनो वार्ड लेखिएको कोठाको बेडमा खाजा खाइरहेका थिए । भूकम्पले चर्केको भवनमा टिनका पाता टाँसिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स र बिरामीको भीडभाड हुनुपर्ने अस्पतालमा मूलगेटबाट भित्र छिर्दा सुरक्षा गार्डबाहेक कोही देखिँदैनन् ।
आकस्मिक विभाग सँगैको बोर्डमा ७ जना चिकित्सकको नाम लेखिएको छ । तर, नियमित रूपमा एक जना मात्रै अस्पताल आउँछन् । ओपीडी कोठा पनि सुनसान छ । क्लिनिक भन्नसमेत नसुहाउने
यो अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो ।
पेडियाट्रिक र गाइनो/ओपीडी लेखिएका बन्द कोठाहरू । तस्बिरहरू : मकर/कान्तिपुर
‘डिन कार्यालयले सबै ठीक छ, सम्बन्धन दिँदा हुन्छ भनेर दिएको रिपोर्टका आधारमा सम्बन्धन दिइएको हो,’ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले भनिन् । उनले आफूहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्रै गरेको पनि बताइन् । सम्बन्धन दिएर त्रिविले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको समेत उनले बताइन् । सम्बन्धन दिनु भनेर ६ पटक ताकेता पत्र आएको र सम्बन्धन नदिँदा अदालतको मानहानिको मुद्दा दायर हुने भएकाले सम्बन्धन दिन बाध्य भएको पनि त्रिपाठीले दाबी गरिन् । अहिले सम्बन्धन पाए पनि सञ्चालन हुनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने उनले बताइन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । त्यस्तै बिरामीको ‘अकुपेन्सी’ ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । पूर्वाधार सम्पन्न ल्याब तथा ओपीडीमा सय विद्यार्थीका लागि दैनिक पाँच सय बिरामी हुनुपर्छ । आईसीयू, सीसीयूको सुविधा हुनुपर्छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा विधेयकमा दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । यस्ता सर्त र तोकिएको मापदण्ड सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता लत्याउँदै त्रिविले अस्पताल नै सञ्चालन नभएकालाई सम्बन्धन दिएको हो । कलेज सञ्चालन गर्ने भनिएको भवन बनाउने बेलादेखि नै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । यो भवनले नकारात्मक वातावरणीय असर पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार एवं अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।
धापासी र बालप्रेमीको जित ›
कस्तो बन्दै छ प्रदेश सरकार ?पुस १, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
‘कारागारको अवस्था नाजुक’
‘कारागारको अवस्था नाजुक’मंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
‘सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभा चाहिँदैन’मंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
‘अध्यादेश जारी नहुँदा संघीय संसद् गठन अवरुद्ध’मंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
आईएफएको नयाँ गठन आदेश पारित
आईएफएको नयाँ गठन आदेश पारितमंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
‘साम्यवादको होइन, राष्ट्रवादको विजय’मंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
फर्किए म्यानमारका सेना प्रमुख
फर्किए म्यानमारका सेना प्रमुखमंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नेपाली सेनालाई राष्ट्रसंघीय पदक
नेपाली सेनालाई राष्ट्रसंघीय पदकमंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नयाँ सरकारसँग काम गर्न आतुर : भारतमंसिर २९, २०७४पूरा पढ्नुहोस्